Inkonzo yethu - Zhejiang Chaolian Electronic Co., Ltd.
Ikhaya > Ngathi > Inkonzo yethu
I-Sur-link ihlala ithatha yonke imizamo yokudala isisombululo esenziwe ngokwesiqhelo kwiimfuno ezahlukeneyo phantsi kwesikhokelo sefilosofi yenkampani - eProfessional, Concentrative and Dedicated. Kwaye kukho uninzi lwabasebenzi abaziingcali ukusombulula ingxaki odibana nayo kwiimeko ezahlukeneyo.
Izixhobo zethu zovavanyo olukumgangatho ophezulu kunye nenkqubo yolawulo lomgangatho yenzululwazi inokuqinisekisa abathengi bethu ngeemveliso ezikumgangatho ophezulu ngaphambi kokuhambisa. Umthengisi omnye uya kujongana nayo yonke imicimbi malunga neodolo yakho yokuthenga ukusuka ekuqaleni kuye esiphelweni, kunye nokubonelela ngezinto ozifunayo.
Iqela liza kujongana nazo zonke izikhalazo ezivela kubathengi ezinje ngomgangatho, ukupakisha, ubungakanani kunye nokuhambisa, njl njl.